Indoda ePisces Emtshatweni: Ngaba luhlobo olunjani lomyeni? - Ukuhambelana
Eyona Ukuhambelana Indoda ePisces Emtshatweni: Ngaba luhlobo olunjani lomyeni?
Njengophawu lomqondiso wabo, amadoda ePisces ahamba nokuhamba xa kusiza ebomini. Kubonakala ngathi azikaze zikhawuleze okanye zenze isigqibo ngokungxama.
Kungokwemvelo ukuba izinto zenzeke ngale ndlela kuthathelwa ingqalelo ukuba zilawulwa yiplanethi iNeptune, irhuluneli yamaphupha kunye nokomoya. Le planethi inceda amadoda ePisces ukuba ayile ngakumbi kwaye abaleke inyani ngoncedo lweengcinga zabo.
I-Pisces indoda njengendoda, ngamafutshane:
Iimpawu: Imvakalelo, ilula kwaye inobubele
Imiceli mngeni: Ukuphinda kabini kunye nokungazithembi
Uya kuthanda: Unikwa yonke intuthuzelo ayifunayo
Kufuneka afunde: Ukulawula umtshato rhoqo.
Ngaba indoda yasePisces ilungile?
Kwimeko apho uthathe isigqibo sokutshata nendoda ezelwe ePisces, lindela ukuba izinto phakathi kwenu zibe zezothando kakhulu. Akunandaba nokuba uza kuba naye ixesha elingakanani, uya kukubhalela imibongo kwaye akuphathele iintyatyambo ezininzi.
Uthando lwakhe luya kubonakaliswa yonke imihla, ke unokufumana olona lwalamano luhle wakha wanalo.
Unokucinga ukuba umtshato yinto nje kuye kuba abantu abakwiphawu lakhe banemvakalelo kwaye banovakalelo. Ngelixa baphonononga ulwalamano lwabo ngokwendlela abavakalelwa ngayo, kuninzi malunga nala manzi kunokuba bubunzulu nje abahlangabezana neemvakalelo ngabo.
Kuyinyani ukuba lo mbandela ubaluleke kakhulu xa sele beza kutshata kwaye uninzi luyabaxa xa kuchazwa indlela iPisces eziva ngayo izinto, kodwa ingakumbi ngabo ngaphezu kobunzulu beemvakalelo zabo.
Ubudlelwane kunye nendoda yePisces buya kugxila kwindlela aguquguqukayo kwaye abe nesisa ngayo, singasathethi ke ngokuba amandla akhe okuthanda ngokungathandabuzekiyo kunye nokuxolela kuya kuphakanyiswa kananjalo.
Ayinamsebenzi indlela anokuziva ngayo, indoda ezelwe ePisces iya kuhlala ingowokuqala ukuxolisa. Njengomyeni wakho, uya kuncama izinto ezininzi ukuze akubone wonwabile kuba iimfuno zakhe azikhathali kangako kuye xa sesinye isiqingatha sakhe ukuba azive anelisekile.
Ngamanye amaxesha uthobekile kakhulu, usenokungabi liqabane elifanelekileyo lomfazi ofuna umntu owomeleleyo noqinisekileyo ukuba abe secaleni kwakhe.
La manenekazi ajonge ukulawulwa kwaye alahle lonke uxanduva lwabo kwindoda ethi ibekho ebomini babo ngaxa lithile kufuneka bajonge omnye umntu.
Njengokuba kunjalo, indoda yePisces inokuba neentloni kakhulu xa ijongene noxanduva, ndingasathethi ke ukuba akaze abe namabhongo okanye aqhutyelwe ukuba aphumelele.
Ukuba ufuna umyeni owenza imali eninzi kwaye ufuna ukukuxhasa, mfune kwenye indawo kuba ngokuqinisekileyo akakho ePisces.
capricorn indoda kubudlelwane
Ukuba ngalo lonke ixesha uphupha kwaye uhlala kwilizwe lakhe, le ndoda akukho lula kakhulu ukuba nayo. Kuyinyani ukuba zininzi iimpawu zakhe azigcinayo kwaye ungoyena mntu unemfesane nothando kumadoda kwi-zodiac, kodwa unokuba sisandla xa esala ukujongana nenyani.
Ngapha koko, akanakuze akuvumele ukuba ungene kwihlabathi lakhe kuba le yeyona ndawo ahlala kuyo ekhululekile, okuthetha ukuba ungaze uqikelele okwenzekayo engqondweni yakhe.
Uyachukumisa, unemvakalelo kwaye kulula ukuba ayonzakalise, ke umfazi ofuna ukuba secaleni kwakhe ixesha lokudla ubomi kufuneka ayiqonde le ndoda ngeyona ndlela anokuyenza.
Ukuba kunokwenzeka ukuba uhlale nalo mntu, lindela ukuba angaze abeke izinto apho babekhona kwaye ahlale kwindawo engalungelelananga.
Akathandi ukwenza nantoni na yasekhaya kwaye ukhetha isiphithiphithi ngaphezulu koqeqesho kunye nocwangco. Ke ngoko, kusenokwenzeka ukuba nguwe oza kukhathalela yonke imiba esebenzayo xa uhlala naye.
Uya kukubuyisela kuwo wonke umsebenzi omkhulu owenzayo ngokuqinisekisa ukuba uhlala uzalisekisiwe ngokwasemphefumlweni, ngokumamela iingxaki zakho kwaye ube secaleni kwakho ngalo lonke ixesha ufuna uncedo lwakhe.
Ithuku lakhe lihlala lixelela le ndoda ukuba itshate kwaye ihlale phantsi, kodwa ayazi ukuba ingayikhetha njani iqabane layo, ke kuyenzeka ukuba iphele ilalahla umfazi wamaphupha ayo kuba enengxaki zomoya, ngakumbi ukuba wayekhe wenzakala ngaphambili.
Abantu abazalelwe ePisces bathanda abafazi abasoloko bekhalaza kwaye bedlala ixhoba. Amadoda alo mqondiso atsaleleke kakhulu kumanenekazi aneemvakalelo zoomama ezomeleleyo, oko kuthetha ukuba banokuba nempumelelo enkulu kumanenekazi amadala.
Indoda yePisces njengendoda
Indoda yePisces inokuba yindoda egqibeleleyo yosapho ebanyamekeleyo abo ibathandayo. Uphakathi kwamadoda anesisa nothando kwi-zodiac, ndingasathethi ke ngesimilo.
Uya kuhlala umfumana elonwabela ixesha alichithe ekhaya, kodwa hayi ngaphezulu kwendoda ezelwe ngumhlaza. Nokuba yeyiphi indlela, umyeni wePisces uya kuhlala engumboneleli olungileyo kwabo bamlindileyo ubusuku bonke.
Ubonakala ngathi une-intuition enkulu kwaye usebenza ekwenzeni amaphupha akhe azaliseke ngendlela ecace gca. Ngelixa uhlala efuna ukwenza umfazi wakhe azive ngathi ukhethe indoda egqibeleleyo, kubonakala ngathi ngamanye amaxesha uyasilela ukwenza oku.
Ngapha koko, uhlala ephulukana nokubambelela kwinyani kuba ulahleka kwezakhe izimvo namaphupha. Uninzi lweengxaki zemihla ngemihla zibonakala ngathi ziyamongamela, ndingasathethi ke ngezimvo eziza nazo kunokuba ziyinyani.
Unokuba yiyo yonke into ayifunayo umfazi wakhe, kodwa okwenzekayo ngasemva kwengqondo yakhe kuhlala kuphazamisa kwaye kuphazamisa indlela yakhe yokuphila ebomini.
Le ayisiyonto umfazi anokuyifuna kumyeni wakhe, ngakumbi ukuba bobabini bayasokola ukuziphilisa. Ezona mpawu zakhe zibi kukuswela kwakhe amandla, amandla kunye nozinzo.
Abasetyhini abaninzi balindele ukuba abayeni babo babe ngababoneleli, kodwa indoda yePisces idinga inkuthazo enkulu kunye nenkuthazo evela kwinkosikazi yakhe ukuba uza kudlala le ndima.
Unovakalelo, uvakalelo kwaye kulula ukulimaza. Umfazi wakhe kufuneka alindele nantoni na ukuba yenzeke xa ekunye naye kuba unezimvo ezininzi eziphikisanayo kunye nemibono.
Ukuba nenenekazi elizinzileyo elinokumnika lonke ukonwaba aludingayo, angaqala ukumthemba loo mntu ngentliziyo yakhe yonke. Kuba kulula kakhulu ukuba nefuthe kuye, unokuthatha isimilo somfazi wakhe kunye nezinto anomdla kuzo.
Ufuna inenekazi elihle ebomini bakhe ukuba lifanele libe nemfesane. Umfazi ogqibe kwelokuba abe ngumfazi wakhe kwaye ukuhlala naye unokucinga ukuba ngoyena mntu ulula kwaye kulula kuye wakha wadibana naye njengoko ehamba nje nokuhamba xa kusiza ebomini bakhe.
Akafuni kukhanya, ke xa kwindawo engaqhelekanga kwaye ejikelezwe ngabantu angabaziyo, unokuthula kwaye azigcine.
Xa ephikisana nenkosikazi yakhe, uyakuhlala ekhetha indlela elula yokuphuma kuba engazi ukuba kuthetha ntoni ukusebenza, ngakumbi xa kufikwa kumandla obudlelwane.
Indoda yePisces iyayazi indlela yokuthetha kodwa inobunzima bokuhlanganisa izimvo zayo, ke inokubadida abantu ngendlela azivakalisa ngayo, ndingasathethi ke ukuba usoloko ezele zizinto eziphikisanayo kwaye unokutshintsha ingqondo yakhe ukusuka kumzuzu omnye ukuya komnye.
Unenkanuko yenyama, ke akafuni mfazi onokumenza ukuba abukeke elungile emhlabeni, naye onokwanelisa ngokwesondo. Njengokuba kunjalo, unika ukubaluleka okuninzi kwisini kwaye lonke ixesha ukhangela iqabane lakhe elifanelekileyo lokwenza uthando.
Isithandwa sakhe kufuneka sikwazi ukuqonda indlela esebenza ngayo ingqondo yakhe kwaye angaze abonise ukungakhuseleki kwakhe. Le ndoda ifuna ukukhuthazwa, ke ukuthanda kwakhe kufanele ukuba kugcinwe kuphila.
Xa umyeni, anganeminqweno ephezulu, kodwa akasoze anikezele ekubeni nesisa, ukuba nomtsalane kwaye akulungele ukuncama yonke into ukuze usapho lwakhe lonwabe.
Ukuba ukhuthazwe ngokwaneleyo, angenza unxibelelwano phakathi kwakhe nenkosikazi yakhe lomelele kwaye luyimfihlakalo. Usenokugxila kakhulu kubumoya nakwizinto azenzayo zonqulo, kodwa oku kuya kumnceda kuphela ukuba aphakame kwaye axhumeke kwi-Universe.
Iipisceans zinokuphazamisa nezinto ezintle ezenzeka kubo, ngakumbi xa uswele kakhulu kwaye uqala ukuziva kungekho mntu unokuziqonda ngokwenene. Kulungile ukuba bayile kuba indima yomculi okhathazekileyo ilungile kubo.
Aba bemi banokuxhomekeka ngokulula etywaleni nakwezinye izinto, esi sesinye sezizathu zokuba uninzi lwabo luqhawule umtshato.
Kusenokwenzeka ukuba iqabane labo liza kucela ukwahlukana, ngakumbi xa bengabonakali bekwazi ukudibanisa ubomi babo, nto leyo ebenza babe netyala lokwahlula ixesha labo elininzi.
indlela yokuxelela indoda yegemini iyakuthanda
I-Pisces eFanelekileyo yoMdlalo: Ngowuphi ahambelana kakhulu?
Iimpawu zoBudlelwane bePisces kunye neengcebiso zothando
Ukuhambelana kwePisces kuthando
Ngomhla wamashumi amabini anesibhozo ku-Matshi i-Zodiac yi-Aries-Ubuntu obupheleleyo beHososcope
Matshi 2 Imihla yokuzalwa
abantu abazalwe nge-aprili 12
Icala elibi leepisces man
unyaka we-rat 1972
ngowuphi umqondiso ngoSeptemba 24
Uphawu lweZodiac ngoMeyi 13
uphawu lwe-zodiac lwango-Agasti 13
Indoda ye-gemini ezelwe ngo-juni 20